बाफ रे! सिनेमामा त दुरुस्तै मानिस
कृष्णप्रसाद पराजुली मंगलबार, असोज २६, २०७८, ११:१२
हाम्रा निम्ति रेडियो सुन्ने, चलचित्र हेर्ने कुरा सपनाजस्तै थियो। कतै-कतै पसलमा झुन्ड्याइएका भित्तेघडी हेरेर हामी समय थाहा पाउँथ्यौँ। कसै-कसैले कोट इस्टकोटको बगलीमा भिर्ने घडी लिएका हुन्थे। ग्रामोफोन चाहिँ बजेको सुनिन्थ्यो। त्यो रेडियो बजेको सुन्दा उभिन्थ्यौँ हामी। ग्रामोफोनमा मित्रसेन, मेलवादेवी र अरू पुराना गायकका केही गीत मैले त्यस्तै बेला सुनेको हुँ। केही पङ्क्ति अझै सम्झनामा आउँछन्–
–धानको बाला झुल्यो हजुर देशै रमाइलो
-लाहुरेको रेलीमाई फेसनै राम्रो
रातो रुमाल रेलीमाई खुकुरी भिरेको
-अब त जाऊँ कान्छी घर
बाटो छ उकाली-ओराली
-किन गछ्यौ तानातानी, दुई दिनको छ जिन्दगानी
-लोग्नेले भन्नुभो मलाई भाँडाचुलो गर्।
चलचित्रलाई ‘बाइस्कोप’ भन्थे। दरबारतिर देखाइन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो। हामीले हेर्न पाएका थिएनौँ। बेलुकी बाङ्गेमुढामा भनिएको पण्डित मुरलीधरको पुराणप्रवचन चाहिँ निकै सुनियो। कथाहरू जोड्दै भनिएको चाखलाग्दो हुन्थ्यो पुराण। समय अगाडि बढ्दै गयो।
२००६ सालमा नै काठमाडौँमा सिनेमा हल खुल्यो। अहिले विशालबजार भएको ठाउँमा सभागृह थियो। त्यसै ठाउँमा खुल्यो सिनेमा हल। नाउँ रहेको थियो– जनसेवा सिनेमा हल।
‘काठमाडौँमा पनि सिनेमा आयो, हेर्ने होइन?’ साथीभाइ भन्थे।
‘हेर्ने नि, अलि हलुका होस् न।’ हामी भन्थ्यौँ।
काठमाडौँ सिनेमा हल जनसेवा सिनेमा हल भएकै थिएन। त्यो हलमा टिकट पाउन ठूलो कुरा पाएझैँ लाग्थ्यो। टिकटको मूल्य क्रमशः यस्तै थियो- पाँच सुका, एक रुपियाँ, तीन सुका र मोहर। टिकट किन्नेहरूको लाम लामै हुन्थ्यो। लाममा अलिकति पनि गडबडी भयो भने पुलिस (प्रहरी)हरू लिई कर्णेल चन्द्रबहादुर थापा आएर त्राहिमाम् पारी हुत्त्याइदिन्थे।
हामीले पनि बल्लतल्ल टिकट लिएर सिनेमा हेर्‍यौँ। बाफ रे बाफ! त्यहाँ त मानिस बोल्दा रहेछन्, गाउँदा रहेछन्, नाच्ता रहेछन्, रुँदा र हाँस्ता पनि रहेछन्! छक्कै परियो। हलबाहिर बार्‍हमजा कागतको सोतोमा राखिएको नुनिलो, चटपटे खानेकुरा बच्थ्यो। हाफ टाइम (अर्द्धविश्राम)मा बार्‍हमजा लिएर खाँदै फेरि सिनेमा हेर्‍यौँ ।
अलिपछि डेरामा सजिलो हुन्छ भनेर केही दिन घरबाट श्रीमतीलाई पनि काठमाडौँ पठाइदिएका थिए। उनलाई पनि सिनेमा देखाऊँ भन्ने उत्सुकता जागेर जनसेवा सिनेमा हल पुग्यौँ। पहिले नै बुक गरिएकाले टिकट लिन गाहो भएन। श्रीमती नवकिशोरी भइसकेकी थिइन्। उनलाई सँगै ल्याएको देखेर एक जना सहपाठीले फड्कार्दै भने–
‘ओहो! केटी लिएर हेर्न आएको?’
‘हो, तर यिनी त्यस्ती केटी होइनन्- मेरी दुलही हुन्!’
‘ओहो! बिहे पो गरिसकेको?’ उनी यति भनी जिब्रो टोक्तै जिल्ल एकातिर तर्के। हामीले सिनेमा हेर्‍यौँ।
यसरी दुई-चारवटा सिनेमा हेरेपछि सिनेमा सामान्य लाग्दै गयो। पछि त श्रीहल (फोहरा दरबार, कान्तिपथ), जय नेपाल चित्रघर (नक्साल), मुनलाइट (माइतीघर), विश्वज्योति (जमल), रञ्जना (फसिकेब) आदि सिनेमा हल पनि खुले। पाटनमा अशोक सिनेमा हल खुल्यो भने भक्तपुरमा पनि नवदुर्गा मन्दिर खुल्यो। आठदस वर्षसम्मै सिनेमा निकै हेरियो। उतिबेला देखाइने सिनेमाहरू अहिलेजस्तो रङ्गीन थिएनन्, श्यामश्वेत नै थिए। सिनेमाका नायक-नायिका तथा पात्रपात्राहरूको पहिरन पनि त्यस बेलाकै चलनअनुसारका थिए। उतिबेला सिनेमाको प्रचार पनि ठिक्कै थियो। ‘आवाज’, ‘नयाँ समाज’ आदि समाचारपत्रमा चलचित्रका कथा छापिन्थे- त्यत्ति हो।
२००७ सालअघिको कुरा गर्दा कथाजस्तै हुन्छ। मनोरञ्जनका साधन भन्नु पनि के थिए र? हामी त मानिसको भीड हेर्थ्यौ‌ं, साँढे जुधेको दृश्य हेर्थ्यौ‌ं। तराईतिरबाट आउनेले देखाएको चटक हेर्थ्यौ‌ं। असन, इन्द्रचोकमा कतै साँढे जुध्न थालेपछि तिनका पछाडि टिन ठटाएर साँढेलाई झन् उत्तेजित बनाउँथे केही उरन्ठेउला मानिस। चटक खास गरी हिउँदयाममा शिवरात्रिताका निकै देखिन्थ्यो। रानीपोखरी दक्षिणको हात्तीपाटी यता (सोह्रहाते गणेशस्थानको पूर्व) बाँसको लिङ्गोमा देखाएको चटक हेर्दा म निकै छक्क परेको थिएँ।
चैततिर टँडिखेलमा देखाइने घोडेजात्रा हेर्थ्यौ‌ं। तोप हान्ने ठाउँदेखि रानीपोखरी दक्षिण बाटाको छेउसम्म घोडा कुदाइन्थ्यो बेतोडसँग। साइकलको रेस (दौड) पनि हुन्थ्यो। भित्रैसम्म पुग्ने कोसिस गरेर मैले घोडेजात्रामा हुने खेलहरू हेरेको थिएँ। कहिलेकाहीँ टँडिखेलको मुखमा र धेरैजसो जात्रामात्रामा दोहोरी गीत सुन्थ्यौँ- गीत सुन्ने मानिसहरू दायाँबायाँ झ्वाप्पै हुन्थे।
सार्वजनिक पुस्तकालय कतै देखिएनन्। हामी बाटाको छेउ रूखमुनि बेच्न फिजाएर राखिएका पुस्तक आक्कलझुक्कल हेर्थ्यौ‌ं। काठमाडौँमा बस्ताबस्तै मैले यस्ता रमाइला दृश्य देखें जुन दृश्य मेरो मानसपटलमा गहिरोसँग अङ्कित भए। यहाँ बसेर अध्ययन गर्दागर्दै त्यस्ता विविध दृश्य देखेपछि छक्क परेर हेरेँ। तिनको प्रसङ्ग माथि दिइसकिएकै छ। नयाँ कुरा देख्ता चौचौ लाग्ने नै भयो, उसमाथि छिप्पिदै गएको किशोर उमेर, म एक किसिमले लठ्ठै परें। ती बेला आफूले जेजे देखें एकदमै ठूलो कुरा देखेको अनुभव गरेको थिएँ।
जे देखे पनि, जे भोगे पनि आफ्ना निम्ति ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ थियो। आफूलाई त उतिखेर साइकल चढ्नु पनि ठूलै कुरा लाग्थ्यो। कोही-कोही लेखक, शिक्षक कम्पाउन्डर, डाक्टर र प्रोफेसरसम्म पनि साइकल चढ्थे र काममा जान्थे। अरू धेरैजसो त पैदलै हिँड्थे। हामीलाई पनि साइकल चढ्न, सिक्न मन लाग्यो।
एक जना आफूभन्दा जेठा साथी थिए- आफ्नै जिल्लाको मङ्गलटारका रोहिणीपसाद मैनाली। उनी साइकल चढेर अड्डा जानु-आउनु गर्थे। उनीसँग राम्रो हिमचिम भएकाले साइकल चढ्न सिकाइदिन भनें। टुँडिखेलको मुख (अहिलेको रत्नपार्क)मा उनले आफ्नै साइकल चढाएर ठेल्दै लगे र ‘ह्यान्डिल यसरी समाउनू, जतातिर साइकल लड्न खोज्छ- त्यहीँनेरि अर्कातिर मोड्नू’ भनेर सिकाए र आफूले पछाडिबाट ठेलिदिए। पचास-साठी मिटर अगाडि गएपछि लडें। दुई-तीन चोटि त्यसो गर्दा निकै आँट आयो।
कमलाक्षीमा र फसिकेबका पनि साइकल भाडामा पाइन्थ्यो। घण्टाको बीसपच्चीस पैसा भाडामा साइकल चढ्यो, एक घण्टामा फर्कियो गर्न थालियो। साइकल लिएर धेरैजसो तीनधाराको खुला चौर र कहिलेकाहीँ टुँडिखेल, सानो टुँडिखेल पुगिन्थ्यो।
पहिले सिक्ता लड्नुबाहेक पछि त्यस्तो लड्नेवर्ने क्रिया भएन। लड्न खोजे गोडा टेकिहालिन्थ्यो। एकपल्ट पानीपोखरीबाट झर्दा तलबाट लहरी आउँदै रहेछ। साइकलमा ब्रेक लगाउन खोज्दा ब्रेक बिग्रिएको रहेछ, लाग्दै लागेन। लहरीबाट जोगाउन खोज्दा साइकल बाटामा किनारापट्टि झाङमा जोतेँछु। हातमा अलिकति दरफर्‍यायो, अरू केही भएन।
एकपल्ट दुइटा साइकल लिएर तीन जना साथी टेबहालभित्र चौरमा गयौं। अलि जान्ने साथी साइकल लिएर नयाँसडकतिर लागे। नरदेवी-नेटपाचोतिरका एक जना पसले साथी र म त्यहाँभित्रै रह्यौँ। ती साथीले ब्रेक लगाउन नजान्दा साइकलको घच्चाबाट एउटा बच्चा लडिहाल्यो, साइकल पनि लड्यो। साथी गल्लीबाट भागे। म पनि मलाई समाउँछन् भनेर टाप कसें।
पछि नयाँसडक जाने साथी आएछन्। उनी अलि पाकाझैँ थिए। टोलेहरूले उनीसँग पो दगलफसल गरेछन्। पच्चीस रुपियाँ तिरेर उनले साइकल लिएर आए। बीस रुपियाँ बच्चा लडाउनेले तिरे। पाँच रुपियाँ ती पसलेसँग लागेको मैले तिर्नपर्‍यो। साइकल चढ्ने सोखमा यसरी एकपल्ट जरिवानासमेत खाइयो। त्यसपछि कुनै घटना भएन। धेरैपछि आफैँले साइकल किनेर निकै वर्षसम्म साइकल चढें। साइकलले मेरो काममा धेरै सहयोग पनि पुर्‍यायो।
-यो पुस्तक अंश हामीले स्व.कृष्णप्रसाद पराजुलीको आत्मकथा शिखरयात्राबाट लिएका हौँ।
‘पहिचान पुरस्कार २०७८’ का लागि पाँच पुस्तक छनोटमा विगत ६ वर्षदेखि वितरण हुँदै आएको पहिचान पुरस्कारको यस वर्षको संस्करणका लागि उत्कृष्ट पाँच पुस्तक छनोटमा परेका छन्। पहिचान पुरस्कार क... आइतबार, कात्तिक ७, २०७८
रुबीको ‘अपराध’ रुबी, तिमीले किन बुझेनौ आफ्नै नामको अर्थ? तिमी त माणिक्य रत्न हौ जुन चिज तथाकथित अमिरहरुको साथमा मात्र रहनु पर्छ। शनिबार, कात्तिक ६, २०७८
कान्ती सिंहको पुस्तक 'चौरासी व्यञ्जन' सार्वजनिक कान्ती राणा सिंहको 'चौरासी व्यञ्जन' पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो। शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८